Xog:-Xiliga La Qabanayo Dooda Musharixiinta Madaxweynaha Soomaliya oo Laga Heshiiyay | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
Warar lagu kalsoonan karo oo ay halayso idaacadda Simba ayaa ku waramaya in Mushariixinta madaxweynaha Soomaliya iyo Guddiga qaban-qaabada doorashada Madaxweynaha Soomaliya ay xalay kulan ku qaateen Hoteelka Jaziiraee Magaalada Muqdisho, iyagoo kawada hadlay Arrimaha doorashada iyo sidii loo qaban lahaa dooda musharixiinta oo la shaaciyay dhawaan in la joojiyay.
Kulanka waxaa ka qeyb galay xubnaha ugu muhiinsan ee Musharixiinta Madaxweynaha Cusub ee dowladda Soomaliya iyo Gudoomiyaha Guddiga qaban-qaabada doorashada Madaxweynaha Dr C/raxmaan Ducaale Beyle.
Musharixiinta madaxweynaha Cusub ee Soomaliya ayaa ku wargaliyay Gudoomiyaha Guddiga qaban-qaabada doorashada Madaxweynaha Dr C/raxmaan Ducaale beyle in aysan doorashada ka qeyb gali doono hadaan la qabanin dooda Musharixiinta, islamarkaana aan laga qeyb galinin Saxaafadda Madaxa Banaan oo horaan loo diida.
Xubnaha kulmay ayaa ku heshiiyay in Dooda Musharixiinta Madaxweynaha la qabto 6-bishaan February oo ku beegan maalinta isniinta ah islamarkaana laga dhigo labo qeyb, isla maalintaasna lasoo gaba-gabeeyo.
Dhanka kale Mushariixinta Madaxweynaha Soomaliya ayaa guddiga qaban-qaabada doorashada Madaxweynaha ka dalbaday in xilka laga qaado taliyaha Ciidamada booliska Soomaliyeed Maxamed Shiikh Xasan Xaamud oo dhawaan sheegay in Taageero uu u muuujiyay Xasan Shiikh maxamuud Madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday , Xaamud Sidoo kale waa Gudoomiyaha Guddiga amniga dooorashooyinka dalka.
Balse Gudoomiyaha Guddiga qaban-qaabada doorashada Madaxweynaha Soomaliya Dr C/raxmaan Ducaale beyle ayaa arintaas ku gacan seeray waxa uuna sheegay in taasi shaqadooda aysan aheyn.